Akwụkwọ ekeresimesi na akụkọ. Nhọrọ | Akwụkwọ akụkọ
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Akwụkwọ
Ọbụghịkwa otu Navidad enweghị a Nhọrọ nke akwụkwọ na akụkọ gbasara, site na ya na ndị niile na-ege ntị. Na nke a na-egosi ma ọrụ oge ochie na dickens, nke a na-apụghị ịgbaghara, ọbụna site na Truman Akwa mkpuchi, site na nke ọtụtụ ndị edemede Spanish dị ka Emilia Pardo Bazan na aha ndị ọzọ dị ka JRR Tolkien. Anyị na-ele anya.
1 Nleta sitere na Saint Nicholas - Clement C. Moore
2 Akụkọ ekeresimesi zuru oke - Charles Dickens
3 Akụkọ banyere ekeresimesi na ndị eze - Emilia Pardo Bazán
4 Akụkọ ekeresimesi - Enid Blyton
5 Akụkọ ekeresimesi Spanish: site na Bécquer ruo Galdós - Ndị ode akwụkwọ dị iche iche
6 Akwụkwọ ozi sitere na Santa Claus - JRR Tolkien
7 Akụkọ atọ. Ememe ekeresimesi, ekeresimesi, onye ọbịa ekele - Truman Capote
Nleta nke Saint Nicholas - Clement C. Moore
Abụ a nke American Clement C. Moore bụ onye nnọchi anya nke Krismas gburugburu ụwa. Ebipụtara ya na 1823, ọ gbanwere akara ngosi ekeresimesi site na ewebata na nke mbụ Santa Claus yi uwe uhie, na sleigh nke reiner dọtara ma na-ejuputa sọks ndị a kpọgidere na chimni na ihe egwuregwu ụmụaka. Mbipụta a gụnyere ihe atụ nke Ilse Bischoff na Arthur Rackham na-atụgharị ya Luis Alberto nke Cuenca n'amaokwu jikọtara ọnụ dị ka mita nke mbụ.
Akụkọ ekeresimesi zuru oke - Charles Dickens
Dickens dị mkpa na oge na-enweghị ike ịbụ ihe ya, n'ihi na ihe ha na-ekwu na ọ chepụtara Christmas. Ma ọ bụ na ndị edemede ole na ole ji ọtụtụ ihe kpalie nna ukwu na see mmụọ nke oge a nke afọ. Ebe a na-agụnye ha, na mgbakwunye na ndị a ma ama Akụkọ Krismas, Akụkọ anọ ndị ọzọ gbasara ọnọdụ ekeresimesi nke Javier Olivares gosipụtara.
Akụkọ ekeresimesi na ndị eze - Emilia Pardo Bazán
Emilia Pardo Bazán gosipụtara ọha mmadụ nwere nnukwu ihes ndịiche nke ọ kọwara n'ụzọ zuru ezu site n'itinye ịda ogbenye ọnụ na kasị ostentatious akụ. Ndị na-akpa ike nke eakụkọ ndị a embodyakụkụ dị ka ọrụ ebere, udo ma ọ bụ nraranye ọzọs ihe omimi n'ụzọ nwere ike iyi ihe ọhụrụ ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi na ha na-eme na Christmas. Tinye aha dị ka Ụbọchị ekeresimesi nke Pope, Jesus, Ọnwụnwa nke Nwanne nwanyị Mary, Ebube ekeresimesi nke onye ọkpụkpọ, Ihe ngosi ọmụmụ, Je.gị na Ụwa o Peeji omume rụrụ.
Christmas akụkọ - Onye Blyton
Aha kpochapụrụ ọzọpsyche nwata na ntorobịa maka ụbọchị ndị a bụ nke onye Britain na-ede akwụkwọ nke ụdị ndị a. Enka bu nchịkọta nke gụnyere Akụkọ 6 nke ekeresimesi ebe ụmụaka, fairies, ihe egwuregwu na elves bụ protagonists.
Akụkọ ekeresimesi Spanish: site na Bécquer ruo Galdós - Dị iche iche na-ede akwụkwọ
Es eleghị anya otu n'ime las Zuru oke karịas anthologys nke Spanish ekeresimesi akụkọ ihe karịrị otu narị afọ. N'akwụkwọ a casi mba Ọ dịghị onye n'ime ndị ukwu na-efu ndị edemede nke ọkara nke abụọ nke narị afọ nke XNUMX dị ka Alarcón, Bécquer, Galdós, Clarín ma ọ bụ Blasco Ibáñez. Ndị ode akwụkwọ amachaghị ama nọkwa, mana ndị na-agụ akwụkwọ oge ahụ dịka Ortega Munilla ma ọ bụ Octavio Picón, na ndị ọzọ nabatara ha nke ọma.s.
Akwụkwọ ozi sitere na Santa Claus - JRR Tolkien
Na nke a nchịkọta akwụkwọ ozi na eserese kpokọta ihe niile onye odee Britain a ma ama ọ na-edegara ụmụ ya akwụkwọ ozi kwa afọ. N'ime yas Santa Claus na-agwa, site na ọgụgụ isi njem, ụfọdụ nzuzo dị ka ihe ọ na-emekarị n'afọ ndị ọzọ mgbe ọ na-agaghị ekesa onyinye n'ụwa niile.
Akụkọ atọ. Ememe ekeresimesi, ekeresimesi, onye ọbịa ekele - Truman Capote
N'ikpeazụ, eaha a mmezi sitere na Truman Capote ebe sha we chikọta atọ nke ya echefu echefu forays n'ime ókèala nke ebe nchekwa, gara aga na nwata. TOọ bụrụ na anyị nwere ncheta atọ nke nnọkọ ezinụlọ na mmemme ezumike dịka ekeresimesi abụọ na otu Ekele. Ọs kpakpando Buddy, na traisiokwu nke Nwa nwoke Truman, onye na-ekerịta abụọ n'ime ha (Ebe nchekwa ekeresimesi y Onye ọbịa Ekele) na Miss sook, onye ikwu nke ọ na-enwe mmetụta nke ukwuu n'oge ya na ndị ikwu nne ya bi na Alabama.
Na nke atọ, Krismas, Buddy na-aga New Orleans izute nna ya, onye ọ casi mba mara. N'oge niiles odee na-atụgharị uche na-ekwu na adịghị ọcha, ịhụnanya na ihe ọjọọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Akwụkwọ ekeresimesi na akụkọ. Nhọrọ